galmudugnews.com » Warqad Sir ah oo laga helay Gudigii Farsamada laguna Badalay Magacyada Hogaamiyaashii Kooxaha Rag kale(Aqriso Cadeyn)
Home » WARARKA » Warqad Sir ah oo laga helay Gudigii Farsamada laguna Badalay Magacyada Hogaamiyaashii Kooxaha Rag kale(Aqriso Cadeyn) Warqad Sir ah oo laga helay Gudigii Farsamada laguna Badalay Magacyada Hogaamiyaashii Kooxaha Rag kale(Aqriso Cadeyn) galmudug on
Sep 2nd, 2012 //
No Comment Views 16897Shabakada Warbaahinta galmudugnews.com ayaa heshay Warqad si hoose uga soo baxday Gudiga Farsamada Soo Xulitaanka Baarlamaanka Cusub ee Soomaaliya (TSC) Warqadaas ay ku qoran yihiin Magacyada Xubno ay Gudiga jeebkooda kasoo magacaabeen ayna doonayaan in ay Baarlamaanka ku daraan.
Magacyada ku qoran Warqada kasoo baxday Gudiga Farsamada ayaa ah mid aysan ka warqabin Odayaasha Dhaqanka Beelaha Soomaaliyeed ee xubnaha uga harsan yihiin Baarlamaanka, kuwaa oo horey u gudbiyay magacyada Xubnaha Beelahooda u matalaya Baarlamaanka , hasa ahaatee si cadaalad daro ah ay Gudiga Farsamada usoo celiyeen qaarkoodna ku badalay Xubno kale ay lacago laaluush ah ka qaateen iyo Xubno ehel la ah.
Warqadan kasoo baxday Gudiga Farsamada ayaa ku taariiqeesan 31-ka Bishii Agoust ,waxaana horey loo shaaciyay in Gudiga Farsamada Waqtigooda uu dhamaaday iyagu naftoodana horey u qireen in Waqtigooda dhamaaday , iyadoona Xiliga Warqadan soo baxday uu Baarlamaanka Soomaaliya lahaa Gudoon Dhameestiran ay doorteen kaa oo hada Hogaamiya.
Warqadan kasoo baxday Gudiga Farsamada ayaa si Hoose looga helay Maxamed Cali Xeyle oo ah Xubin kamid ah Gudiga Farsamada kana soo jeeda Beesha Murusade ,waxaana Ninkan horey loogu eedeeyay Xubno aan Odayaasha Dhaqanka ee Xulayay Baarlamaanka ka warqabin uu ku daray Liiska Xildhibaanada Beesha Murusade.
Qoraalka Warqada ku qoran ee laga helay Maxamed Cali Xeyle ayaa muujineysa in la doonayo in lagu carqaladeeyo go’aankii kasoo baxay Maxkamada Sare ee Dalka taariiqdu marka ay aheed 28-kii Agoust, Xiligaa ay Maxkamdu Xukmisay in Xubno Hogaamiyo kooxeedyo ahaa iyo rag kale aysan laheyn wax Dambi ah lagana been abuurtay ayna xaq u leeyihiin in ay kamid Noqdaan Baarlamaanka Cusub ee Soomaaliya.
Gudiga Farsamada ayaana Hogaamiyaashii iyo Xubnihii ay celiyeen oo u badnaa Beesha Hawiye ku eedeeyay in ay yihiin Dambiilayaal dagaal, xili aysan jirin Cid Hogaamiyaashaasi eedeysay ama Maxkmad ku xukuntay in ay yihiin Dambiilayaal Dagaal oo dadkooda iyo Dalkooda dambi ka galay.
Waxaana hada socdo Qorshayaal la doonayo in Maxkamad lagu soo taago Gudiga Farsamada ee Waqtigooda dhamaaday kadib markii ay eedeemo iyo aflagaado u geesteen Hogaamiyaal Beelahooda soo xusheen iyo Musuq maasuq badan ay gudigu saameeyeen intii ay ku jireen soo Xulitaanka Baarlamaanka Cusub ee Soomaaliya.
Ugaaska Beesha Murusade Ugaas C/laahi Ugaas Xaashi Fara Cadde waxa uu sheegay in Xubnahan 8-da ah ee ku qoran Warqada ay Gudiga Jeebkooda ka qorteen Odayaashana aysan la socon ,waxa uuna intaa raaciyay in Horey sidaan oo kale Gudiga Farsamada Beesha Murusade ugu dhaceen Xubin aysan iyagu soo xulin balse Gudiga Farsamada ku galiyeen Musuq maasuq iyo Qiyaano .
Xubnaha hada muranka ka taagan yahay ayaa ah ilaa 4-Hogaamiye ay Maxkamada sare ee Dalka horey u cadeesay una go’aamisay in ay kamid noqdaan Baarlamaanka Cusub ee Soomaaliya loona sameeyay kaararka aqoonsiga ee cadeenaya in ay Xildhibaano yihiin inkastoo aan la dhaarin .
Xubnaha la isku heesto ayaa kala ah.
3-Cumar Maxamed Maxamuud (Cumar Finish )
Gudiga ayaana Xubnahaan oo kalsooni ka heesta Beeshooda iyo Odayaasha Dhaqanka ee Xulayay Baarlamaanka waxa ay ku badaleen 4-kamid ah Raga ku qoran Warqadan kasoo baxday Gudiga Farsamada kuwaa oo kala ah .
1-Nuur Ali Ahmed
2-Aadan Xaaji Xasan
3-Siciid AXmed Kadiye
4-Prof Cali Sheekh Ismaaciil (Gacal)
Xubnahaan Afarta ah ay gudiga ugu tala galeen in ay ay ku carqaladeeyaan Xubnaha an horey usoo xusnay oo heesta Kalsoonida Beelahooda iyo Odayaasha Dhaqanka, ayaa odayaal aan la hadalnay waxa ay sheegeen in Xubnahan magacyadooda ay Gudiga soo qoreen aysan la socon meel laga keenay iyo waxa ay yihiin wax war ahna aysanba ka heyn in ay dalka joogaan iyo in kale ragaan Gudiga soo qorteen.
Gudiga Farsamada ayaana noqday kuwa Musuq maasuq badan kasameeyay intii ay dalka Joogeen, waxaana Musuqaasi la sheegay in ay ku qaateen lacago aad u fara badan ay kaga heleen Xubno ay jeebkooda ugu dareen Baarlamaanka iyo Qaar kamid ah Saxiixayaasha Road-mapka oo gudiga ka codsaday in ay Hogaamiyaashii kooxaha ka hor istaagaan kamid noqoshada Baarlamaanka Cusub ee Soomaaliya kuna tilmaamaan Dambiilayaal Dagaal.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21011 hitsContact US - 19639 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15732 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15031 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13923 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13865 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13812 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13267 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11770 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11735 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11709 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11517 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11503 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11347 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11167 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11120 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11052 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11036 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10721 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10342 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10225 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10132 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10009 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9911 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9773 hits Home About